१२ करोडको लागतमा बन्न लागेको नेपाली चलचित्र ‘एक्स–९’ बाट कति पारिश्रमिक लिँदै छन् सुनील सेट्टी ? – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८ समय: १३:३५:२३
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले प्रतिचलचित्र १२८ करोड भारुसम्म पारिश्रमिक लिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । उनले चार्ज गरेको यो पारिश्रमिक नेपाली चलचित्र उद्योगमा निर्माण हुने फिल्मको करिब एक वर्षको बजेट हो । (नेपालमा ठिकठाक चलचित्रका लागि अहिले डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको छ ।) यति महँगो पारिश्रमिक चार्ज गर्ने बलिउड अभिनेताहरू नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्न आए भने कति पारिश्रमिक लिएलान् ?
निर्माण पक्षले कति पारिश्रमिकमा सुनीललाई अनुबन्ध गरिएको भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन । निर्देशक भट्टले पनि पारिश्रमिक खुलाउन चाहेनन् । तर उनले माेटाे रकममा सम्झौता भएको बताए ।
Last Updated on: October 28th, 2021 at 1:35 pm
३७३६ पटक हेरिएको